ညီလင်းသစ်: စိတ်၏ချည်တိုင် နိုင်ငံကလေးသို့ (၇)
Posted by ညီလင်းသစ် au 16.12.13
လေးဂွပစ်ပုံပစ်နည်း လွဲနေတယ် လက်မက အပေါ်ကနေရမှာ ကိုညီလင်းက သေချာသင်မပေးတာ..
အိမ်ပြန်ခါနီးဆိုတော့ အိမ်ကိုပိုလွမ်းသွားတာပဲ ဆက်ဖတ်ချင်သေးတယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ .. သားသားနဲ့ မအိမ်သူ လေးဂွပစ်နေပုံက ချစ်စရာ :))))
လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် တစ်မတ်ကို သဘောကျသွားပါ၏
ကြည့်လို့ ဖတ်လို့ တောင်မ၀သေးဘူး။း)
ခရီးစဉ်နှစ်ပတ်တိတိအထိ ကသောကမျောနဲ့ အဆင်ပြေစွာအချိ်န်ကုန်သွားတဲ့အတွက် ထိုက်တန်ပျော်ရွှင်သောခရီးစဉ်တစ်ခုအဖြစ်အဆုံးသတ်ဖြစ်ခဲ့တာ ကြည်နူးစရာပါ အစ်ကို မောလည်းမောတာပေါ့ ဒါပေမယ့်မမောဘူးပေါ့...။
ချည်တိုင်လေးကနေ ပြန်သွားတော့မယ့် နောက်ဆုံးပိုစ့်မို့လားမသိ၊ ဖတ်ပြီး လွမ်းသွားတာပဲ။ သားအမိနှစ်ယောက် လေးခွပစ်နေတဲ့ပုံကို သဘောအကျဆုံးပဲ။
Oops! 90% of the last picture resembles the pic I postedayear ago. :P
ခရီးစဉ်က ကပျာကကသီ တက်သုတ်ရိုက် ပါလား.. အတော့်ကို မျက်ကလဲဆန်ပျာ ဖြစ်ခဲ့မှာပဲ.. :P ဟိ.. မေ့လုလု ဖြစ်နေတဲ့ စကားလုံးလေးတွေ လျှောက်သုံးကြည့်တာပါ... ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုညီလင်း များများသွားခဲ့တော့ ကျမတို့တွေ များများ ဖတ်ရတာပေါ့
ဂျက်တို့တောင်ကြီးတို့ညောင်ရွှေတို့လဲ ခုချိန်ထိအောင်၅ ရက်ဈေးပဲလေ လွမ်းလိုလဲကောင်း အစားအစာတွေကြည့်ပြီး သရေတွေလဲကျ ပုံတွေကြ့်ပြီး ပြန်လဲပြန်ချငိမိတယ်
ကိုညီလင်းသစ်ရေ....ပုံတွေကတော့ အမြဲကောင်းနေတာမို့ မပြောတော့ပါဘူး။ မအိမ်သူလေးဂွပစ်နေတဲ့ ဘယ်လက်ကိုင်ပုံလေးက ချစ်စရာလေးနော်.....ဟဟဟ။ သတိရတယ်ဗျိုးးးးး။ တွေ့ခွင့်ရခဲ့တာ ခဏလေးပေမဲ့ ခင်စရာကောင်းတယ်။ ဟက်ဟက်ပက်ပက် စကားလက်ဆုံအတွက် အမှတ်ထင်ထင်ဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း မအိမ်သူကို ပြောပြလိုက်ပါနော်း)
အရာရာ ဟာ အရာရာ က နေ တဖြေးဖြေးတရွေ့ရွေ့
နေ့တွေက အရင်လို အရင်အတိုင်း မပြောင်းလဲစွာ ... :)
​အောင်​ပန်း က​လော မိုင်း​သောက်​ ​ညောင်​​ရွှေ ​ရွှေ​ညောင်​
လွန်​ခဲ့​သော ၃၀ နှစ်​​ကျော်​က​ပေါ့...
အဲဒါ မော်ဒန်လေးခွပစ်နည်းဗျ..၊ အသစ်လေ.. အသစ်..၊း)
အိမ်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတော့ နောက်ဆို လွမ်းစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့..၊း)
တကယ်ကို ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အဖြစ်တွေပေါ့ဗျာ…၊း)
ပြီးပြီဗျ…၊း) ပုံတွေကတော့ ကျန်သေးတယ်ဆိုပေမယ့် ခရီးစဉ် တစ်ခုလုံး ခြုံမိတဲ့ပုံတွေ တင်ထားတာပါ၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အစအဆုံး လိုက်ပါအားပေးတာ တကယ့်ကို ကျေးဇူးပါဗျာ..၊
ဟုတ်တယ်ဗျာ၊ မောလည်းမောသလို မမောလည်း မမောပါဘူးလေ၊ ဒါနဲ့ ̔ကသောကမျော̔ ရဲ့ စာလုံးပေါင်းအမှန်ကို ရေးပြခဲ့လို့ ကျေးဇူးနော် ညီမ…၊း)
အရာရာမှာ အဆုံးသတ်ဆိုတာ ရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာ..၊း) အားပေးခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်တွေအတွက် ကျေးဇူးပါနော်..၊
Really…? Where can I see that pic? :)
မစူးနွယ် ဖြည့်ပေးလိုက်တော့ ပိုတောင် ပြည့်စုံသွားပြီ၊း) အခုတလော ကွန်မန့်တွေ ရေးခဲ့လို့လည်း ကျေးဇူး…၊
ရှမ်းပြည်မှာက လွမ်းမယ်ဆိုရင် လွမ်းစရာတွေချည်း ပါပဲလေ၊ အဲဒီ တစ်နေ့နေ့ အမြန်ဆုံး ရောက်ပါစေဗျာ…၊
ဆုံခဲ့ရချိန်က တိုတောင်းပေမယ့် တကယ့်ကို အမှတ်ထင်ထင်ပါပဲဗျာ..၊ အစ်မတို့ကိုလည်း သတိရနေပါတယ်၊
သိ င်္ဂါရ…
တကယ့်ကို အဲဒီအတိုင်း ပါပဲလေ…၊း)
ကလောဈေးထဲမှာ ဟင်းထုပ်စားရတာ ကြိုက်တယ်၊ ၅ ရက် ဈေးတွေထဲမှာတော့ ကျနော်က ကလောဈေး၊ အောင်ပန်းဈေး၊ နန့်ပန်ဈေးနဲ့ တောင်တိုဈေး တွေကို သဘောကျတယ်ဗျ၊ စာလာဖတ်လို့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်…။
thank you for all the posts and awesome pics .. !!
စာကြွေးတွေ လာရှင်းသွားတယ် အစ်ကို။း)
တိုတောင်းတဲ့ ခရီးစဉ်လေးဖြစ်ပေမယ့် ရောက်လေရာ အရပ်ဒေသတိုင်းလိုလို စိတ်ဝင်စားအောင် ပုံတွေနဲ့အတူ ဖေါ်ညွှန်းထားတာ မှတ်လောက်စရာပါ။ မိနစ်ပိုင်းလေးသာဆုံခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးမို့ အမှတ်တရလေးပါ မောင်ညီလင်းရေ။
အသေချာ လိုက်ခံစားသွားတယ် အကိုရေ
တချိန်မှာတော့ ညီမ ငယ်ငယ်ကထဲက
ထာဝရ နေထိုင်ခွင့်ရပါလို၏ လို့လည်း
ကွန်ပြုတာ တချက်ချက် သုံးနိုင်တဲ့
ပို့စ်နဲ့ပုံရိပ်တွေကို ဖတ်ကြည့်ရင်း လိုက်ပါလွှင့်မျောသွားမိတယ်
၅ရက်ကပ်လွဲသွားတယ်ကွယ်... North pointကိုသာ၂၄ရက်မတိုင်ခင်စောလာဖြစ်ခဲ့ရင် မိသားစုလိုက်ဆုံဖြစ်ကြမှာ :(
ခရီးသွားပို့စ်က အဆုံးသတ်သွားတော့ ကိုညီလည်း အနားရပြီပေါ့။ ခရီးသွားရင်း၊ အပမ်းဖြေရင်း၊ မိတ်ဆွေများနဲ့ဆုံရင်း၊ ဓာတ်ပုံများရိုက်ရင်း ဗဟုသုတတွေ မျှဝေပေးတဲ့ ကိုညီရဲ့ခရီးသွားပို့စ်လေးကို အစမှအဆုံး တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်သွားမိတယ်။ ကိုညီတို့ မိသားစုအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာ ခရီးတွေ မကြာမကြာ ထွက်နိုင်ကြပါစေ..။